Home News Masuul Qaraxyo Gurigiisa lagu weeraray oo Al shabaab si Dirqi ah kaga...
Masuul Qaraxyo Gurigiisa lagu weeraray oo Al shabaab si Dirqi ah kaga Baxsaday
Gudoomiyaha Degmada Qansaxdheere Aadan Cabdi, ayaa ka badbaaday isku day dil oo ay la damacsanaayeen Ururka Al Shabaab, kadib qaraxyo lagu weeraray hoygiisa.
Xalay fiidkii ayaa rag hubaysan oo ka tirsan Ururka Al Shabaab, waxa ay bambada gacanta laga tuuro ku weerareen hoyga Magaalada Qansaxdheere uu ka degan yahay Gudoomiyaha.
Laba bambo oo nooca gacanta laga tuuro ah ayaa lagu weeraray Gudoomiyaha gurigiisa, waxaana dhaawac uu ka soo gaaray askarta ilaalada u ah Gudoomiyaha.
Illaa saddex askari ayaa la xaqiijiyay inay dhaawacmeen, ma jirto dhimasho ka dhalatay qaraxaasi bambada ah ee Shabaab ay ku weerareen guriga Magaalada Qansaxdheere uu ka degan yahay Gudoomiyaha.
Raggii Shabaab ka tirsanaa ee qaraxa ku weeraray Guriga Gudoomiyaha ayaa baxsaday, markii qaraxyada ay ku weerareen guriga.
Ciidamada ammaanka Magaalada Qanshaxdheere ayaa saaka waxa ay wadaan hawlgalo ay ku xaqiijinayaan ammaanka, sidoo kalena ay ku baadigoobayaan Shabaabkii qaraxyada ku tuuray hoyga Gudoomiyaha.